Ityala lokuSebenza ngeSelfowuni | Martech Zone
Ityala lokuSebenzisa ngokuShukumayo
NgoLwesithathu, Julayi 10, 2013 UKelsey Cox
Ukusebenza kweselula Ukutshintsha hayi kuphela indlela abantu abanxibelelana ngayo, kodwa nendlela abaphila ngayo, abasebenza ngayo kunye nevenkile.
Njengoko sele uyazi, ukukhula kokusebenzisa isixhobo esiphathwayo kuye kwasasazeka okomlilo wasendle kule minyaka idlulileyo. Iingcali zikholelwa ukuba inani lezixhobo eziphathwayo ziya kufikelela kwi-7.3 yezigidigidi ngo-2014, eqinisekisa ukuba kukho inguquko yeselfowuni eqhubekayo. Kubathengisi, kukulwa okanye ukubhabha: ungakwamkela ukuhamba kwaye ulungelelanise isicwangciso sakho se-Intanethi ukuze ulingane nelizwe elinemifanekiso emininzi, okanye unikezele ngezixhobo zakho kwaye usinde kancinci, kodwa uqiniseke ngokufa.
Ngoku ka Mashable, U-2013 "ngunyaka wokuphendula uyilo lwewebhusayithi," ukuqhubela phambili ukuqhuba isidingo seewebhusayithi kunye neeapps ukuba zilungiselelwe nakuphi na nakubo bonke ubungakanani bescreen. Ngama-90% abantu abasebenzisa izikrini ezininzi ngokulandelelana, kunye ne-67% yabathengi abaqala kwisixhobo esinye kwaye bagqibezele ukuthenga kwabo kwenye, isidingo samava olwelo kubalulekile.
Nanku ukujonga okupheleleyo kwedatha Fumana ukoneliseka:
tags: UkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiUkulungiswa kwefowuniUkulungiswadesign ezwayoUyilo lwewebhu oluphendulayo
Uhlalutyo lwam: Uhlalutyo lukaGoogle lwe-iPhone
Intengiso: Abathengi bayoyisa njani iMfazwe ukuze baqwalasele